Taageerayaasha Chelsea Oo Maanta La Filayo in ay London Ku renjiyeeyaan Midabka Baluuga ah - jornalizem
Taageerayaasha Chelsea Oo Maanta La Filayo in ay London Ku renjiyeeyaan Midabka Baluuga ah
Tobanaan kun oo taageerayaal Chelsea ah ayaa maanta isagu soo bixi doona wadooyinka galbeedka London halkaasoo ay ku dabaaldegi doonaan hanashada koobka taariikhiga ah ee Champions League iyo koobka FA Cup.
Taageerayaal aad u qiireysan ayaa la filayaa inay salaan u saaraan geesayaashooda, kuwasoo bas dusha ku furan kula soo wareegi doono gudaha magaalada London, ka dib in ka yar 24 saac markii ay Munich ku qaadeen koobkoodii ugu horeeyay ee Champions League.
Waxaana dabaaldegan uu 4ta galabnimo xilliga Ingariiska uu ka bilaaban doonaa Stamford Bridge, iyadoo tababare Roberto di Matteo, kabtan John Terry iyo ciyaartoyda kale ee labada koob isku qaaday ay soo bandhigi doonaan koobkoodii ugu danbeeyay ee ay hanteen.
Blues ayaa loo caleemo saaray boqorada Yurub markii ugu horeysay taariikhdooda ka dib markii ay rigoorayaal kaga qaadeen kooxda Jarmalka ee Bayern Munich.
In ku dhow 25 kun taageerayaal Chelsea ah ayaa ku sugnaa Munich, halka kuwa badan ay kala socdeen TV-yada kuwasoo si isku mid ah ugu dabaaldegay hanashada koobkaan taariikhda u galay.
Xitaa ras’isalwasaaraha Ingariiska David Cameroon ayaa ciyaarta la daawanayay dhigiisa Jarmalka haweyneyda la yiraahdo Angela Merkel iyo madax kale oo adduunka ah oo ka qeybgalaya shirka G8 ee ka socda Camp David.
Markii ugu danbeysay oo kooxda dabaaldeg weyn ku qabato London waxaa isagu soo baxay 70 kun taageerayaal ah kuwasoo 2010kii u dabaaldegayay hanashada Premier League iyo FA Cup.